Raysul Wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay madaxweyne ku xigeenka Burundi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
20th February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Kampala – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo xalay gaaray magaalada Kampala ee dalak Uganda oo booqasho rasmi ah uu ka helay ayaa la kulmay Madaxweyne ku-xigeenka dalka Brundi Gervais Rufyikiri. Labada Mas’uul ayaa ka hadlay sidii xiriir dhow iyo iskaashi ay u wada wadaagi lahaayeen.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay kaalinta ciidnaka AMISOM iyo horumarka ka muuqda Soomaaliya oo kasoo kabanaya burbur xoog badan. Waxaa Ra’iisul Wasaaruhu uu sheegay in ay u qorshaysan tahay in dhowaan ay ka guulaystaan kooxaha Nabad-diidka ah.
“Burundi waxaa ay qayb weyn ka qaadatay xasiloonida Soomaaliya, labada dal waxaa ay sii xoojinayaan xiriirka u dhexeeya , waxaana aan iska kaashan doonnaa dib u dhiska hay’adaha dawladda. Burundi waa dal ay soo mareen dhibaatooyin dagaal, waxyaabo badan ayaan ka sheekaysanay oo ay kamid tahay dhibaatooyinkii dalkaasi ka dhacay iyo sida ay hogaamiyayaashu ugu guulasteen in xal loo helo nabadda, korna loo qaado isku xirka shacabka iyo dawladda si kor loogu qaado adeegyada bulshadu ay u baahantahay” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay horumarka ay Somalia ku talaabsatay, dalka Burundi waxaa uu gacan ka gaysan doonaa sidii Soomaaliya ay uga dhalan lahayd xasilooni, dib-u-dhis loogu samayn lahaa hay’adaha dawladda iyo horumar laga gaaro dhanka adeegyada bulshada” ayuu yiri Madaxweyne ku-xigeenka dalka Burundi Mudane Gervais Rufyikiri.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay soo gaaray magaalada Kampla, waxaana uu maanta la kulmi doona Madaxweynaha dalka Uganda Mudane Yuweri Museveni iyo mas’uuliyiinta kale ee dalka Uganda oo ay ka wada hadli doonaan xoojinta danaha ka dhexeeya labada dawladood.
Gudoomiyaasha Baarlamaanada Somalia iyo Sudan oo kala saxiixday heshiis Iskaashi